ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးကိုစစ်ဗိုလ်ကြီးကအဓမ္မ ကျင့် ပါ တယ် ဆို တဲ့ ကိစ္စ အ တွက် ဆယ် တန်း ကျောင်း သူလေး ယွန်းသော် တာမြတ်နိုး ရဲ့ တောင်း ပန် စာ… | Danya Wadi
»သတင်းများ»ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးကိုစစ်ဗိုလ်ကြီးကအဓမ္မ ကျင့် ပါ တယ် ဆို တဲ့ ကိစ္စ အ တွက် ဆယ် တန်း ကျောင်း သူလေး ယွန်းသော် တာမြတ်နိုး ရဲ့ တောင်း ပန် စာ…
ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးကိုစစ်ဗိုလ်ကြီးကအဓမ္မ ကျင့် ပါ တယ် ဆို တဲ့ ကိစ္စ အ တွက် ဆယ် တန်း ကျောင်း သူလေး ယွန်းသော် တာမြတ်နိုး ရဲ့ တောင်း ပန် စာ…
Posted by danyawadi on October 18, 2013 in သတင်းများ
ကျေးဇူးပြု၍ နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာပေးပါရှင့်၊ အမေနဲ့ ပထွေးက အကြပ်ကိုင်နေတဲ့ကြားကနေ အကို ဗိုလ်ကြီး ဆီကို၊ ညီမ ယွန်းသော်တာမြတ်နိုး (အထက ၂ မရမ်းကုန်း) ရိုသေစွာ လက်အုပ်ချီလျက် စာရေး လိုက်ပါတယ်၊ ဒီစာလေးက အကို ဗိုလ်ကြီးဆီ တနည်းနည်းနဲ့ ရောက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို post အဖြစ် ဖြန့်ဝေပေးဖို့လည်း သမီး တောင်းဆိုပါရစေရှင့်။
အဖြစ်မှန်ကို လူအများ သိမှသာ ကျေးဇူးရှင် အကို ဗိုလ်ကြီး အပေါ် ပြစ်မှားမိခဲ့တဲ့ ကျွန်မတို့သားအမိ နေ့စဉ်ခံစားနေရတဲ့ စိတ်ဝေဒနာနဲ့၊ အပြစ်တွေကင်းစင်သွားလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့ ခုလို မရှက်မကြောက် ဝန်ခံရတာပါ။ အကို ဗိုလ်ကြီး ရဲ့ ခွင့်လွှတ်မှုကို မမျှော်လင့်ပေမယ့် ကျွန်မတို့သားအမိရဲ့ ဘဝပေး အခြေအနေ သမီးရဲ့ ရုပ်သေးရုပ်လိုဖြစ်နေတဲ့ ဘဝအပေါ် နားလည်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ အမေ ဒေါ်နီလာယု(ခ)ယွန်းမီမီ (Ph 0973176738) ဟာ ယခင်က စင်တင် စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုမှာ သီချင်းဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။
အမေဟာ စင်တင်မှာ ညစဉ် သီချင်းဆိုရင်း ဖေါက်သယ်များနဲ့ ငြိစွန်းပြီး ကျွန်မကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ကလေးအဖေ ကတော့ အခုထိ ဘယ်သူမှန်း မသိခဲ့ရပါဘူး။
နောက်တော့ ကျွန်မတို့သားအမိ စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေဖို့ အတွက် အမေဟာ ဇနီးနဲ့ သားသမီးရှိတဲ့ အိမ်ထောင်သည် တစ်ဦးဖြစ်သူ၊ ကားပွဲစား ဦးဝင်းနိုင် Ph 095157790 သင်္ကန်း ကျွန်းမြို့နယ် ဝေဇယန္တာ အိမ်ယာ၊ နေထိုင်သူနဲ့ ထပ်မံငြိစွန်းပြီး ကလေး ၂ ယောက် ထပ်ရခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မအမေဟာ ဦးဝင်းနိုင်ရဲ့ မယားငယ်အဖြစ် အမှတ် ၅၀၃ ခ အောင်မြေသာလမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ သမိုင်းကုလားကျောင်းမှတ်တိုင် အနီးမှာ နေထိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဦးဝင်းနိုင်ဟာ သူ့မယားကြီးသိမှာ စိုးတာရယ်၊ ကားပွဲစားခေတ် မကောင်းတော့တာရယ်ကြောင့် ကျွန်မတို့ကို ဆက်မထောက်ပံ့ချင်တော့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ပထွေး ဦးဝင်းနိုင်ဟာ မယားပါသမီးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မအတွက် မထောက်ပံ့ချင်တော့ပါဘူး။
ကျွန်မကိုလည်း စင်တင်မှာ သီချင်းဆိုတုန်းက မွေးခဲ့တဲ့ ကောင်မ နင်က စာသင်ကျောင်းနဲ့ မတန်ဘူး စင်တင်သွားဖို့ပဲတန်တယ် လို့ ပထွေးပီပီ နှိမ့်ချဆက်ဆံကာ စာစိတ်မဝင် စားရင် ကျောင်းထုတ်မယ် စင်တင်ပို့မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။
နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာပါရှင့်၊ တကယ်တော့ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေ့က ကျွန်မဟာ ကျူရှင်မတက်ပဲ ရည်းစားနဲ့ တည်းခိုခန်းသွားခဲ့မိတာပါ။ ဒါကို သိသွားတဲ့ ဦးဝင်းနိုင်ဟာ ပထွေးပီပီ ကျွန်မကို ကျောင်းထုတ်မယ်၊ နင့်အမေတုန်းကလို စင်တင်မှာ ရှာစားချေ၊ နင်တို့ကို ဘာမှ ဆက်မထောက်ပံ့တော့ဘူးလို့ပြောဆိုကြိမ်းမောင်းခဲ့ပါတယ်။
အမေနဲ့ ကျွန်မလည်း ကြံရာမရဖြစ်ပြီး ကျွန်မတို့မိသားစု နေမကောင်းဖြစ်တိုင်း ပြသနေကျ၊ ဆေးခန်း ဖွင့်ထား တဲ့ ဗိုလ်ကြီးနဲ့အတူသွားတာဖြစ်ကြောင်း ပြောရင် အခြေအနေမဆိုးနိုင်ဘူးလို့ တွက်ပြီး လိမ်ပြော ဖို့တိုင်ပင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကြံရာမရတဲ့ ကျွန်မတို့သားအမိဟာ ဗိုလ်ကြီးကို အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီး ကျွန်မအနေနဲ့ ကျူရှင်လစ်ပြီး ရည်းစားနဲ့ဘုရားသွားမိတဲ့ အကြောင်း၊ တကယ်လို့ ရည်းစားနဲ့ မဟုတ်ပဲ အကို ဗိုလ်ကြီးနဲ့ လမ်းကြုံလို့ ဘုရားဖူးလိုက်သွားတာလို့ ပြောရင် အခြေအနေအားလုံး ပြေလည်မှာမို့၊ ကျွန်မ ကျောင်းထုတ်မခံရရေးနဲ့ ကျွန်မတို့သားအမိ စားဝတ်နေရေးအတွက် ကြားဝင် ကူညီပေးဖို့ ငိုယိုပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနေ့က ရည်းစားနဲ့ တည်းခိုခန်းသွားအိပ်တာကိုတော့ ဗိုလ်ကြီးခမျာ မသိခဲ့ပါဘူး။ ဦးဝင်းနိုင်က ဗိုလ်ကြီး ဆီ ph ဆက်မေးတော့ ဗိုလ်ကြီးကလည်း ကျွန်မတို့ကို ကူညီတဲ့အနေနဲ့ ‘ဟုတ်ပါတယ် ဘုရားသွား ရင်း ညီမလေးက လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူသွားခဲ့တာပါ’ လို့ သဘောရိုးနဲ့ ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမှာတင် နဂိုကတည်းက ကျွန်မတို့ သားအမိကို ပုတ်ထုတ်ချင်နေတဲ့ ဦးဝင်းနိုင် အတွက် အကွက်ကောင်း ဆိုက်သွားပြီး၊ ဦးဝင်းနိုင် က ဗက နဲ့ ဒီကလေးမနဲ့ တည်းခိုခန်းသွားခဲ့တာ ဗက အနေနဲ့ ဒီကလေးမကို အခု ယူရင်ယူ မယူရင် Media. Facebook, Internet. Journal တွေကနေ တနိုင်ငံလုံးသိအောင်လုပ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ပါတော့တယ်။ ဗိုလ်ကြီးက သူနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့အကြောင်း ကျွန်မတို့သားအမိ အကူ အညီတောင်းလို့ ကူညီပေးတာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ဦးဝင်းနိုင်ရဲ့ အရိပ်ကိုမှီပြီး သူ့သြဇာကို မလွန်ဆန်ဝံ့တဲ့ ကျွန်မအမေဟာ ကျွန်မအနေနဲ့ ဗိုလ်ကြီးနဲ့ညားသွားလည်း ကောင်းတာပဲ အဆိုးထဲကအကောင်းပဲ၊ မညားတောင်မှ နင့်ရှေ့ရေးအတွက် အနည်းဆုံး သိန်း ၃၀ လောက်ရအောင် ဖန်တီးနိုင်တယ် ဆိုပြီး မထူးဇာတ်ခင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် တရားဝင် တိုင်ကြားလို့မဖြစ်ပေမယ့်၊ ကျွန်မတို့ဘက်က မှန်သယောင် အထက်စီးကနေ အတင်း အကြပ်စွတ်စွဲကာ ပိုင်မှ တိုင်သင့်တိုင်မယ်ဆိုပြီး၊ အမေနဲ့ ဦးဝင်းနိုင်တို့ဟာ ကျွန်မတို့သားအမိ အပေါ် စေတနာ ထားခဲ့တဲ့ အကို ဗိုလ်ကြီး အပေါ် media တွေကနေ တစ်ဆင့် တကယ် ရက်ရက်စက်စက် အရှက်ခွဲခဲ့ကြပါတယ်။
မီဒီယာတွေကလည်း အစိုးရမကောင်းကြောင်း၊ စစ်သားမကောင်းကြောင်းဆို ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် အရမ်း စိတ်ဝင်စားနေပြီး၊ internet ပေါ်မှာလည်း သူ့ထက်ငါ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ အလု အယက် ဖွကြတဲ့ အခါ အကို ဗိုလ်ကြီး ခမျာ အတော်ပဲ စိတ်ထိခိုက် နာကျင် ခံစားနေရမယ် ဆိုတာ ကျွန်မ သိပါတယ်။ လူမဆန်စွာ ကျေးဇူးကန်းခဲ့တဲ့ ကျွန်မတို့သားအမိအပေါ် အရမ်းကို နာကျည်းနေမယ်ထင်ပါတယ်။
သမီးဘဝပေးအရ အမေနဲ့ ပထွေး ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်ခဲ့ရတာပါ။
ဒီသတင်းတွေကို internet စာမျက်နှာပေါ်မှာတွေ့တိုင်း သမီးအပေါ် စေတနာနဲ့ ကူညီခဲ့တဲ့ အကို ဗိုလ်ကြီး အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်လွန်းလို့ အကြိမ်ကြိမ် မျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်။
အရင်ကတော့ မထူးဇာတ်ခင်းခဲ့မိတဲ့ ကျွန်မတို့သားအမိရဲ့ မိုက်မဲတဲ့ လုပ်ရပ်တွေသည် အရာထင်လိမ့် မယ်လို့ ထင်မိခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ကျွန်မတို့သားအမိဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ မုန်းတီး ပစ်ပယ်ခြင်းကို ခံနေရပါပြီ။ အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းတဲ့ သားအမိ၊ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြားတတ်တဲ့ မိသားစု လို့ ပြော ဆိုတာကို ခံနေရပါပြီ။
ဘယ်သွားသွား လူတွေက ကျွန်မကို ကြည့်နေတယ် ကျွန်မတို့သားအမိရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ပြောနေတယ် ကျွန်မကို မုန်းတီးနေတယ် လို့ အလိုလို ခံစားနေရပါတယ်။ ဘုရားစင် နားရောက်တိုင်းလည်း ကျွန်မတို့ သားအမိကို တစ်ခုခုက ခြောက်လှန့်နေသလို စိတ်ထဲမှာ အလိုလို တုန်လှုပ်နေရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ရိုးသားတဲ့ ကျေးဇူးရှင် အကို ဗိုလ်ကြီးအပေါ် ပြစ်မှားမိခဲ့တဲ့ သမီးတို့သားအမိကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါ လို့ ဒီနေရာကနေ အကို ဗိုလ်ကြီးရဲ့ ခြေအစုံကို ရှိခိုးဦးခိုက် တောင်းပန် လိုက် ရပါတယ်။
အကို့အပေါ် စော်ကားမိလို့ မျက်နှာမဖေါ်ဝံ့တော့တဲ့ – ညီမ ယွန်းသော်တာမြတ်နိုး (အထက ၂ မရမ်းကုန်း)၊ အမှတ် ၅၀၃ ခ အောင်မြေသာလမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ သမိုင်းကု လားကျောင်းမှတ်တိုင် အနီး။
Min Myanmar – posted via message from ယွန်းသော်တာမြတ်နိုး
(Link > http://networkedblogs.com/Q9AWo)
← ရန်ကုန်မြို့၌ ဗုံးခွဲသူဟု သံသယ ရှိသူများ ဖမ်းမိပြီ
အရေးပေါ်မီးသတ်ကန်ရေခိုးယူသုံးစွဲသူများ ထောင် ဒဏ် ချမှတ်နိုင် သည့် နည်း ဥပဒေ ပြင် ဆင်ရေး ဆွဲ →